Trump oo isbedel ku sameeyay maamulayaasha ololihiisa cudurdaarna ka bixiyay khudbadihiisii hore | shumis.net
Home » News » Wararka » Trump oo isbedel ku sameeyay maamulayaasha ololihiisa cudurdaarna ka bixiyay khudbadihiisii hore
Trump oo isbedel ku sameeyay maamulayaasha ololihiisa cudurdaarna ka bixiyay khudbadihiisii hore
Musharaxa Madaxweynaha ee Xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump ayaa jeediyey khudbadiisi u horeysey tan iyo markii uu wax ka bedelay maamulka ololihiisa doorashada.
Khudbadda Trump ayaa u muuqatey mid uu raali gelin ka bixinaayo hadaladiisi qalafsanaa ee ka soo bixi jirey afkiisa. Donald Trump ayaa guddoomiyaha gudigiisa u magacaabay Steve Bannon, oo hada ahaa madaxa warbaahinta u ololeysa garabka Midig ee loo yaqaan Breitbart News. Ninkan ayaa sidoo kale horey uga soo shaqeeyey qaar kamid ah Bangiyada waaweyn ee wadankaasi Maraykanka.
Isbedalkan uu Trump ku sameeyey guddigiisa ololaha Doorashada ayaa kusoo beegmaysa xili Murashaxa Jamhuuriga ay si weyn hoos ugu dhacday taageeradiisa iyo xog arurinta laga qaaday gobalada waaweyn ee wadanka Maraykanka.
Waa markii labaad oo uu Trump isbedal ku sameenayo hogaanka kooxdiisa ololaha doorashada, wuxuuna bishii June uu xilka ka qaaday gudoomiyihii hore kadib markii ay dacweysay haweenay suxufiyad ah oo uu si xun ulla dhaqmay, wuxuuna xiligaasi magacaabay Paul Manafort oo isagana hada ku socoto baaritaan ku aadan xiriiryo qarsoodi ah oo la sheegay inuu la leeyahay mas’uuliyiin ka tirsan Dowlada Ruushka iyo xukuumadii hore ee Ukraine.
Kadib isbedelka uu ku sameeyay raggii ololaha doorashada ugaga mas’uulka ahaa ayaa waxaa uu booqanayaa Trump gobolka Minnesota oo ay Soomaali badan ku nool yihiin.Donald Trump ayaa marka uu gaaro gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu khudbad ujeedin doonaa dadka ku nool gobolkaasi oo ay ku jiraan Soomaali.
Trump ayaa caan ku ah aflagaadeynta iyo weerarka joogtada ah oo uu ku hayo dadka Islaamka ah iyo Muslimiinta ku nool dalkaasi Mareykanka.
Title: Trump oo isbedel ku sameeyay maamulayaasha ololihiisa cudurdaarna ka bixiyay khudbadihiisii hore